Insimbi engagqwali ye-barbecue mesh material
insimbi engagqwali, i-carbon galvanized wire ephansi. Ukwaluka nezici: ezilukiwe futhi ezishiselwe; Ukumelana nezinga lokushisa eliphezulu, akukho deformation, akukho ukugqwala, non-toxic futhi abanambitheki, kulula ukuyisebenzisa;
I-Stainless steel barbecue mesh shape
ihlukaniswe yaba yindilinga, isikwele, i-arc, njll.
Inqubo ye-Stainless steel barbecue mesh
I-flat woven mesh, i-knurled mesh, i-argon arc welding, i-spot welding, ukupholisha nge-electrolytic
Izinhlobo ze-barbecue mesh: inatha le-barbecue embossed isikwele, i-barbecue mesh eshiselwe isikwele, i-square perforated barbecue mesh, i-square galvanized barbecue mesh, i-square stainless steel stainless barbecue mesh, i-square iron wire barbecue mesh, i-square steel wire barbecue mesh, njll. .
Ukwelashwa okungaphezulu kwe-barbecue mesh
I-barbecue mesh eshiselwe isho i-barbecue mesh eyakhiwe ngokushisela inetha elelukwe ngamagagasi ohlakeni lwensimbi, ukusika ucingo lwensimbi olusemaphethelweni, bese luvuza. Ngokuvamile, kubuye kubizwe nge-galvanized barbecue mesh, futhi kukhona nemeshi yezoso ene-chromium noma i-nickel plating ngaphezulu, ebizwa nge-chrome plated barbecue mesh noma i-nickel plated barbecue mesh. Enhle futhi ephanayo, eqinile, akukho deformation ngesikhathi izoso; Ingaphezulu libushelelezi futhi liyakhanya. Ihlala isikhathi eside, ayigqwali, ayinabuthi futhi ayinambitheki, kulula ukuyisebenzisa.
Izici ze-Barbecue mesh
elukiwe noma elishiselwe ngocingo lwensimbi engagqwali kanye nensimbi yensimbi. Yinhle futhi iyaphana, iqinile, izoso ayigogekile, indawo engaphezulu iyagqama futhi ihlanzekile, ihlala isikhathi eside, ayigqwali, ayinabuthi futhi ayinambitheki, futhi kulula ukuyisebenzisa.
Inhloso ye-stainless steel barbecue mesh
Namuhla, izitolo zokosa inyama edolobheni zikhona yonke indawo. I-Barbecue ibonakala ngamaphethini amaningi. Isibonelo, inyama ingabandakanya inyama yemvu egazingiwe, inyama yenkomo egazingiwe, inkukhu ethosiwe, i-fish kebabs, ama-meatballs, i-offal yezilwane, njll. inkukhu iyodwa ingahlanganisa ama-kebabs enkukhu, amaphiko enkukhu eyosiwe, imilenze yenkukhu ethosiwe, inhliziyo yenkukhu ethosiwe, ngisho nesikhumba senkukhu kanye nommbila. Ngaphezu kwalokho, izithelo ezinjengopelepele wemifino, isitshalo seqanda ngisho nobhanana nazo zingathoswa, Ngakho-ke kuthandwa abantu abasha abathanda ukuzenzela bona.
Okwedlule: Iphakethe lesikrini sokuhlunga izingqimba eziningi zensimbi engagqwali yokunyathela isitembu
Olandelayo: Ubhasikidi wocingo lwensimbi engagqwali/ubhasikidi wokubulala amagciwane